सनातन परम्परा अनुसार श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन नाग पञ्चमी मनाइन्छ । नाग पञ्चमीको दिनदेखि वर्षायाम समाप्त भई हिँउदयाम शुरू हुने धार्मिक मान्यता छ ।
नागका अष्टकूल (अनन्त, बासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिर, कर्कट र शंख गरी अष्टनागको चित्र घरको मुल ढोकामा टाँसेर विधिपूर्वक अष्टनागको पूजा गरिन्छ ।
ज्योतिषशास्त्र अनुसार पञ्चमी तिथिका स्वामी नाग देवता हुन् । श्रावण शुक्ल पक्षमा पर्ने पञ्चमी तिथिका दिन नाग पूजा गर्नाले हानी गर्ने कालसर्प योग शान्त हुने विश्वास गरिन्छ ।
वैदिक परम्परामा नाग देवताको विशेष स्थान छ । हरेक मन्दिरमा नागका मूर्तिहरू पाइन्छन् । हाम्रा प्राचीन कलात्मक घरको प्रवेशद्वारमाथि तोरण स्थापना गर्दा पनि नागको प्रतिक बनाएको पाइन्छ । हिन्दूका आराध्यदेव भगवान् शिवले घाँटीमै नाग धारण गरेको र भगवान् विष्णुले शेषनागलाई आसन बनाएको हाम्रा धार्मिक शास्त्रमा विभिन्न प्रसंग पाइन्छन् । सोहीअनुरुप मन्दिरमा भगवान्का मूर्तिमा सोही प्रतिरूप उतारिएका पनि छन् । हाम्रा पूर्खाबाट हामी नाग लगायत कुनै पनि जीवलाई मार्न नहुने अर्ति प्राप्त गर्दै आएका छौं ।
सनातन धर्ममा नागलाई किन यसरी पूजा गरिन्छ त ? यसबारे केही जिज्ञासा मेटाउन केही धार्मिक र केही वैज्ञानिक तर्क बुझ्ने कोसिस गरौं । हाम्रो अद्भूत संस्कृति र त्यसपछाडिको दार्शनिक उद्देश्यबाट विश्व नै कायल छ । आधुनिक विज्ञानले सत्यलाई पटक–पटक परिवर्तन गरिरहन्छ, हाम्रो संस्कृतिमा रहेका सनातन वैज्ञानिकतालाई त्यही आधुनिक आँखाबाट मात्रै हेरेर बुझ्न सम्भव नहुन सक्छ तर पनि केही सरल तथ्यहरू उजागर गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
योग गर्दा कुण्डलिनी शक्ति जागृत हुन्छ । कुण्डलिनी शक्ति गतिशील भएमा हामीभित्रको ऊर्जाको अनुभव हुन्छ । त्यही कुण्डलिनी शक्तिको प्रतिकको रूपमा सर्पलाई मानिन्छ । ऊर्जाको उच्च अवस्थामा पुगेपछि चर्मचच्छु जागृत हुन्छ । जसले ग्रहण र अनुभव क्षमता उच्च हुन सक्छ ।
योग सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक मानिसको मेरुदण्डभन्दा तल एउटा ऊर्जा संग्रहित हुन्छ, सो ऊर्जा जागृत भएमा आत्मज्ञान प्राप्त हुन्छ । त्यसका लागि ध्यान र आसन गर्नुपर्छ । ध्यान र योगबाट सो ऊर्जा मेरुदण्डको तलबाट माथि मष्तिकसम्म ७ वटा चक्र भएर फैलिन्छ । त्यही नै कुण्डलिनी शक्ति हो । ऋषिमुनिको चित्र र मूर्तिमा मस्तिष्क वरिपरि प्रकाशको घेरा राखिएको हुन्छ, त्यो सोही कुण्डलिनी शक्तिको प्रभाव हो ।
योगका प्रवर्तक ऋषि पतंजलिको शरीर सर्पको र शिर मानिसको देखाइन्छ । सोही सम्बन्धमा सद्गुरुलाई एक जिज्ञासुले प्रश्न गरे – सद्गुरु म पतंजलि र उहाँको शारीरिक संरचनाको बारेमा जान्न चाहन्छु, उनलाई किन सर्पसँग जोडिन्छ ?
सो प्रश्नमा सद्गुरु भन्नुहुन्छ – सर्प एउटा यस्तो जीव हो, जो एक विशेष प्रकारको ऊर्जाप्रति संवेदनशील हुन्छ । यदि तपाईं कुनै खासप्रकारको ऊर्जा सिर्जना गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला सर्प त्योतर्फ आकर्षित हुन्छन् । पतंजलिलाई आधा सर्पको रूपमा देखाउनु केवल एक प्रतिक हो । सर्पलाई कुण्डलिनीको प्रतिक मानिन्छ । यो प्रेमको अभिव्यक्ति हो, जसले पतंजलिलाई शक्तिशाली तरिकाले महसूस गर्नुभयो, उहाँहरूले पतंजलिको शिर र शरीर एक सर्पमा राखिदिनुभयो, ताकि यो देखाउन सकियोस् कि उहाँ तपाईंभित्रको त्यो दिव्यशक्तिभन्दा बिल्कुल अलग हुनुहुन्न । पतंजलि आफ्नो जीवन प्रक्रियासँग यति सुक्ष्मतासँग जोडिनुभएको थियो कि मानिसहरूले उहाँलाई स्वयम् दिव्य ऊर्जा नै हुन् भन्नुभयो । कमसेकम त्यसको आधा हिस्सा त उहाँ स्वयम् हुनुहुन्छ । पतजंलि त्यो मूलभूत शक्तिभन्दा अलग थिएनन्, जो तपाईंलाई तपाईंकोे भौतिक सीमाभन्दा टाढा लैजान्छ, जुन शक्तिले तपाईंलाई आत्मज्ञानको क्षेत्रसम्म लैजान्छ । यसरी उहाँहरूले पतंजलिलाई आधा सर्पको रूपमा देखाए, किनकि उहाँहरू यो कुरा स्वीकार्न चाहन्थे कि पतंजलि कुनै बाहिरी शक्ति नभई भित्री शक्ति हुनुहुन्छ । यति गहिराइबाट पतंजली तपाईंको जीवनमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ । म जहाँ गए पनि सर्पले मेरो पिछा छोड्दैन, यो कुरा उहाँहरूलाई सम्झाउन कठिन हुनेछ, जसको मनमा सन्देह बसेको छ । सर्प संसारको एउटा मात्र त्यस्तो जीव हो, जुन जंगलमै भएपनि तपाईंले आफूलाई एक खास तरिकाले राख्नुहुन्छ भने यसलाई तपाईंले आरामसँग आफ्नो हातमा उठाउन सक्नुहुन्छ । यो विना विरोध तपाईंको हातमा आरामसँग आउनेछ । यो तपाईंलाई केही पनि गर्ने छैन तर यदि तपाईंले आफ्नो सोच पनि बदल्नुभयो भने यो तपाईंलाई तुरुन्तै टोक्नेछ । यदि तपाईं ध्यान गर्नुहुन्छ भने यो तपाईंसँग बेरिने छ र कुनै समस्या हुने छैन तर यदि तपाईंले व्याकुलता देखाउनुभयो भने यो तपाईंलाई सहन सक्दैन । फेरि यो तपाईंको समस्या भइदिनेछ । यो यस धर्तीको सबैभन्दा सुन्दर जीवमध्ये एक हो । अधिकतम विषालु सर्पको दाँत नै हुँदैन । तिनको मुखमा आरीजस्तै संरचना हुन्छ, त्यसले तपाईंलाई टोक्नै सक्दैन । सर्पसँग डराउनु नै अचम्मको कुरा हो । केही मात्रै सर्पबाहेक अरु कुनै सर्पहरू तपाईंको केही बिगार्न सक्दैनन् । उनीहरू तपाईंसँग डराउँछन्, तपाईलाई देख्ने बित्तिकै भागिहाल्छन् तर तपाईं पनि उनीहरूलाई देखेर डराउनुहुन्छ । सर्पको भय बेतुकको र बढाइचढाई बनाएको भय हो । मेडिकल संगठनमा प्रायः २ बेरिएका सर्पलाई प्रतिकको रूपमा देखाइन्छ । यो एक यौगिक प्रतिक पनि हो । भारतमा सर्पको प्रतिक र आध्यात्मिकता धेरै गहिरोसँग आपसमा जोडिएको छ । यस्तो संसारको लगभग हरेक भागमा छ, किनकि जहाँ मानिस जागरुक भए तिनीहरूले सहजै अनुभव गरे कि सर्प खास प्रकारको ऊर्जाप्रति संवेदनशील हुन्छ । त्यो ध्यानप्रति आकर्षित हुन्छ ।’
सद्गुरुको यस जवाफले मानिस र सर्पको आध्यात्मिक सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको लोगोमा पनि सर्पको चित्र राखिएको छ । यसको कारण सर्पको भूमिका मानव स्वास्थ्यका लागि कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने प्रतिक हो । पर्यावरणको सुरक्षाका लागि सर्पको भूमिका सबैभन्दा ठूलो रहेको वैज्ञानिक अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेका छन् । यस पर्यावरणमा रहेका विषालु चिजहरूलाई सर्पले ग्रहण गर्छ ।
जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीका लागि पनि सर्पको संरक्षण अपरिहार्य छ । भगवान् शिवले समुन्द्र मन्थन गर्दा निस्केको कालकुल विष आफ्नो घाँटीमा धारण गरे, त्यसैले शिवलाई निलकण्ठका नामले समेत चिनिन्छ । विषलाई कण्ठमा धारण गर्ने शिवले सर्पलाई पनि घाँटीमै बेरेर पहिरिएको विश्वास गरिन्छ ।
श्रावण महिनामा नै शिवको पनि विशेष पूजा आराधाना गरिन्छ । शिव कुनै व्यक्ति नभई अनन्त अभौतिक ऊर्जा हुन् । ऊर्जाको प्राप्ति ध्यानबाट मात्र सम्भव छ ।
पञ्च तत्वमध्ये जल सृष्टिका लागि आवश्यक छ । सर्पलाई जलको प्रतिक पनि मानिन्छ र जलबाट निस्किने विषाक्त चिजलाई सर्प, बिच्छी, मत्स्य, आदिजस्ता जीवले ग्रहण गरी वातावरण स्वच्छ राख्न मद्दत गर्छन् । त्यसैले नागको पूजा गर्नु भनेको पर्यावरणमा रहेको विषाक्त चिजलाई आफूमा लिई सृष्टिको रक्षा गर्ने जीवको सम्मान पनि हो । धार्मिक तथा वैज्ञानिक दुवै दृष्टिकोणले नाग पूजाको महत्त्व उत्तिकै छ ।